सुनको भाउ बढेको बढ्यै, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ? — Sanchar Kendra
सुनको भाउ बढेको बढ्यै, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बुधबार पनि बढेको छ । बुधबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो भएको हो । मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार तेजाबी सुन प्रतितोला ९७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बुधबार चाँदीको भाउ भने घटेको छ । बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला एक हजार २ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला २० रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाली बजारमा एक वर्षमै सुनको भाउ करिब ३३ हजारभन्दा बढीले बढेको छ । गत वर्षको साउन १२ गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार र तेजाबी सुन प्रतितोला ६४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कायम भएको थियो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला ७ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद सयेर जारी गर्न नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि प्रोत्साहन गरिरहे पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गरेको भेटिएपछि बन्देज गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
‘मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सिधै यो सेयर जारी गर वा नगर भन्न नसक्ने भएकाले प्रबन्धपत्र नियमावलीमार्फत कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अब लघुवित्तले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँदैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा होइन । घुमाउरो बाटोबाट सबै हकप्रद सेयरमा नै बन्देज लगाउन खोजिएको हो ।’